के हो कोरोना भाइरस सावधान ! कोरोना भाइरसले यसरी लिँदैछ ज्यान : २५ जनाको मृत्यु, २ करोडलाई नजरबन्द — SuchanaKendra.Com
के हो कोरोना भाइरस सावधान ! कोरोना भाइरसले यसरी लिँदैछ ज्यान : २५ जनाको मृत्यु, २ करोडलाई नजरबन्द
काठमाडौ । चीनमा महामारीको रुपमा फैलिदै गएको भाइरसले अहिलेसम्म २५ जनाको ज्यान लिएको छ । चीन लगायत अन्य केही देशहरुमा पनि डरलाग्दो बन्दै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनेहरुको संख्या ८३० भन्दा धेरै पुगेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जानकारी दिएका छन् ।
यस बाहेक, २० प्रान्तमा १०७२ व्यक्ति यस भाइरसबाट प्रभावित भएको आशंका गरिएको छ । बिहीबारसम्ममा मृतकहरूको संख्या २५ पुग्यो । चीनका ५ शहरहरूमध्ये सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसका घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको छ । हुवानमा ९० लाख व्यक्तिहरू सहित कुल २ करोड व्यक्तिलाई घर भित्रै बस्न भनिएको छ । यी ५ शहरहरूमा बाहिर जाने बसहरू, रेलहरू र उडानहरू बन्द गरिएको छ।
यसभन्दा पहिले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित मानिसहरू चीन बाहिर सर्दै गर्दा यस रोगको प्रभाव विश्वव्यापी रुपमा ९ देशहरूमा पुगेको छ । एक दिन अघि साउदी अरेबियाको अस्पतालमा काम गरिरहेका एक भारतीय नर्स कोरोना भाइरस संक्रमित भएको भेटियो । यद्यपि सउदीस्थित भारतीय दूतावासले नर्स भाइरसबाट पीडित नभएको बताएको छ । जानकारी अनुसार नर्स मर्सन–सीओभी प्रकारको कोरोना भाइरासबाट पीडित छन् यो अहिले फैलिएको वुहान प्रकारको होईन।
साउदी अरेबियाको वैज्ञानिक क्षेत्रीय संक्रमण नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष डा। तारिक अल–अज्राकीले भने कि भारतीय नर्सहरूलाई भेटिएको कोरोनाभाइरस अर्को प्रकारको हो । यसलाई २०१२ मा साउदी अरेबियामा पहिचान गरिएको थियो । अहिले चीनमा देखिएको वुहान भाइरस पहिले देखिएको थिएन ।
चिनियाँ प्रशासनले सबैभन्दा बढी प्रभावित ५ शहरहरू वुहान, इजो, हुआनगन, चिबी र झिनज्याबाट मानिसहरूलाई प्रतिबन्धित गरेको छ । यी शहरहरूमा सार्वजनिक यातायात र रेलहरू बन्द गरिएको छ । मानिसहरूलाई कारण बिना घर छाड्न अनुमति छैन । साथै, परिचालन पनि प्रतिबन्धित गरिएको छ । विभिन्न देशहरुले चीनबाट आउँने यात्रुहरुलाई विमानस्थलमा गम्भीर रुपमा चेकचाँज गरिरहेका छन् ।